သဘာဝ ပန်းချီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » သဘာဝ ပန်းချီ
Posted by မှော်ဆရာ on Jan 24, 2012 in Photography, Travel | 30 comments
မမြရေလှောင်တမံကို ဓါတ်ပုံကိစ္စ ရောက်ရင်းနဲ့ ရှုခင်းလှလှတွေတွေ့လို့ ရိုက်ခဲ့လိုက်ပါတယ် …
ဓါတ်ပုံဆိုတာထက် ပန်းချီပိုဆန်နေလို့ သဘာဝ ပန်းချီလို့ပဲ အမည်တပ်လိုက်ပါတယ် …
မှော်ဆရာ နဲနဲ တိုင်ပတ်နေလို့ ရွာထဲကို ခဏတဖြုတ်ပဲ အလည်ရောက်နှိုင်တာ ကြာခဲ့ပါပြီ .. ဒါကြောင့် ရွာသူားတွေရဲ့ ပိုစ်တွေမှာ ကွန်မန်းတွေ မပေးဖြစ်ခဲ့တာကိုလဲ ဒီနေရာမှ တောင်းပန်လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား .. နောက်ပိုင်းတော့ ရောက်ဖြစ်မယ် ထင်ပါရဲ့. …
has written 57 post in this Website..
အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ရေးသားချက်များကိုသာ ရေးသားနှိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်. နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးပညာနဲ့ ကျောင်းပြီးပါတယ်။ ပွင့်လင်းမှုနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို မြတ်နိုးပါတယ်။ သဘောကောင်းပါတယ်။ လက်သီးထိုး ပြင်းပါတယ်။ ဓါးထိုးပက်စက်ပါတယ်။ CJ # 9222010
View all posts by မှော်ဆရာ →
အားလုံး ရှယ်တွေပါလား ဟ…။ အောက်ဆုံးက ပုံလေးကို အကြိုက်ဆုံး ဖြစ်ပါကြောင်း ရယ်ပါလေ
ပုံလေးတွေက လှလိုက်တာ မှောဆရာရဲ့ ရိုက်ချက်တွေက ကောင်းလို့ထင်ပ
အောက်ဆုံးပုံလေး သဘောကျတယ် …………..
မဟာဖေ့စဘုတ်တော်ဂျီးမှာ တွေ့လိုက်လို့ …ရွာထဲ ဘာလို့ မတင်သလဲ
မေးမလို့ဟာ… ခုတော့ ဖြေပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီဗျာ…
မိုက်တယ်ဗျို့ ….လက်မ၂ချောင်းထောင် ဇွန်း၂ချောင်းတပ် ရှယ် ပါပဲ လို့
လှလိုက်တာ အရမ်းပါပဲ .. ဓါတ်ပုံမဟုတ်ပဲ ပန်းချီကား ကြည့်နေရသလိုပါပဲ .. ရွာထဲက ဓါတ်ပုံဆြာတွေရဲ့ ပညာကတော့ … ကြောက်ခမန်းလိလိပါပဲ … ပုံကောင်းတွေချည်းတွေ့တွေ့နေရတယ် …
အရမ်းလှတာပဲ … ပန်းချီလို့ထင်ရလောက်အောင် သဘာဝက လှလွန်းတယ် …
မှော်ဆရာ အစွမ်းနဲ့ ဖန်တီးထားသလားမှတ်ရ
စေတီလေးဘေးမှာ လှည်းယာဉ်ကျော့ ကလည်းသဘာဝကျလိုက်တာ
သေချာ စီစဉ်ပီး ၇ိုက်ထားသလားမှတ်ရတယ်ဗျာ
လှလိုက်တာ တကယ့်ကို ပန်းချီကားတွေ ကျနေတာပဲ သဘာဝတရားကြီးရဲ့ အလှက တော်တော်လေးကို အသက်ဝင်တာပါ
မိုက်တယ်ဗျာ မသိရင် ပန်းချီထင်နေမှာ
လှလွန်းလို့ ကာလာများတင်ရိုက်ထားတာလားဟင် ….
အခုမှ မှော်ဆရာ အစစ်ကို ပြန်တွေ့ တော့တယ်။
ပထမတော့ မသိပဲနဲ့ ဘယ်သူ့ပန်းချီကားကို ရိုက်လာတာလဲလို့
စာဖတ်ကြည့်တော့မှ ဓါတ်ပုံလေးတွေဖြစ်နေတာ သိရတယ်။
တကယ်ကို အလေးပြုခဲ့ပါတယ် ညီလေးရေ။
အဲဒီလို ဓါတ်ပုံမျိုးလေးတွေ ကို
ရိုက်နိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ပါသေးတယ်။
စာမဖတ်ပဲပုံအရင်ကြည့်တာ။ ပန်းချီမှတ်လို့။ စာဖတ်မှ ဓါတ်ပုံဖြစ်နေတာ။ တော်တော်လှတယ်နော်။
ကိုမှော်ဆရာရေ တကယ်ပါ အိပ်တန်းတက်ချိန်ပုံလေးက တော်တော်လေးကို
ထင်ပါတယ်။ပေါ်လိုက်၊ပျောက်လိုက်နဲ့ မို့ ပါဗျာ။
ဟုတ်ပါ့ဗျာ .. အလုပ်တွေ ရှုတ်နေလို့ပါ …
ကွန်မန်းပေးကြတဲ့သူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ဗျာ …
ဘာမဟုတ်တဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ ဓါတ်ပုံပိုစ့်လေးမှာ အားလုံးက အချိန်ကုန်ခံပြီး ကွန်မန်းတွေ ပေးတာ မြင်ရတော့ တကယ့်အကျိုးပြုပိုစ့်တွေမှာ ကွန်မန်းမရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားမလို အားမရနဲ့ ရွာသူားတွေကို တဖန် အားနာရပြန်ပါတယ် ..။ကျွန်တော် အလုပ်ရှုတ်နေလို့ ရွာထဲကို မ၀င်ဖြစ်တာပါဗျာ …
အခုတင်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေက မမြရေလှောင်တမံကို ကျွန်တော် ဓါတ်ပုံကိစ္စနဲ့ ရောက်သွားရင်း ရိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေပါ …။ ရေလှောင်တမံကအပြန် လမ်းမှာ ငှက်တွေ ထပျံတာ ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေပြီး မြင်ရတော့ ချက်ချင်းဆိုင်ကယ်ကို ရပ်ပြီး ရိုက်ခဲ့လို့ မထင်မှတ်ပဲ ရလာတဲ့ ပုံလေးတွေပါ ..။မိုးဖွဲဖွဲရွာနေတုန်းဆိုတော့ တိမ်တွေကလဲ လှနေတယ် .. နေလေးကလဲ နဲနဲပွင့်နေတဲ့အခိုက်အတန့်ဆိုတော့ အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ခင်ဗျာ …။ကျွန်တော် contract နဲနဲ ပြန်ချိန်တာပဲ လုပ်လိုက်ရပါတယ် .. ။
လှည်းနဲ့စေတီလေးကတော့ တာရိုးနှစ်ရိုးအပြိုင်ဖောက်ထားတဲ့အပေါ်မှာ ကျွန်တော် ဓါတ်ပုံရိုက်နေတုန်း ကျွန်တော့ဘေးက လှည်းဖြတ်သွားတာ မြင်တော့ စေတီနဲ့ လှည်းနဲ့ဆိုတာ ပနံရမှာပဲဆိုပြီး လှည်းက ဟိုဘက်တာပေါ်မှာမောင်း ၊ ကျွန်တော်က ဒီဘက်တာရိုးပေါ်ကနေ ခြေကုန်သုတ် ၊ လှည်းကိုကျော်အောင်ပြေးပြီးတော့ စေတီနားကနေစောင့်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးပါ ..လှည်းနဲ့ ကျွန်တော့ကြားမှာ ၁၅ပေ ရေနှုတ်မြောင်းကြီး ခံနေပါတယ် …။ တော်တော်လဲ မောခဲ့သလို မောရကြိုးလဲ နပ်ခဲ့တဲ့ ပုံလေးပေါ့ ..
ကင်မရာက nikon D3000 နဲ့ပါ .. မှန်ဘီလူးကတော့ Tamron 18-200 နဲ့ပါ …
ငှက်ပျံတာကို အမှီရအောင် Exposure time 1/200 , F 7.1 နဲ့ ရိုက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျား…..
အဂ္ဂမဟာသရေစည်သူ၊ အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓမ္မ၊ သီရိပျံချီ KING says:
သတိရမိလျှက် ……. ( ! _ ! )
ပုံလေးတွေက ဆွဲဆောင်မှုရှိလို့ တတိယအကြိမ်မြောက်မှာ
လက်ရာမွန် တွေကို စောင့်မျှော်လျှက်
ဒုတိယအကြိမ် ပြန်မန့်ပြီဗျာ …
ပုံ ၁-နဲ့ ၃ မှာ မြူတွေထင်ရဲ့ ….long exposure ရိုက်ချင်သော အခင်းအကျင်းပါပဲဗျား ….
လာလည်မယ်ဗျာ …. ရိုက်ကြ နှက်ကြတာပေါ့….
လိုက်ပို့ပေးမယ် မလား ဟင်င်င်င်င်…
တကယ်လာမှာလား …. တကယ်လာမယ်ဆို တကယ်ကို လိုက်ပို့မယ် …
ပန်းချီ ဆွဲ သူက ပုံကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်တယ် လို့ ထင်ရအောင် ကို ဆွဲ၊
ဓာတ်ပုံ ဆရာ တွေ ကလဲ ပုံကို ပန်းချီ လို့ ထင် အောင်ရိုက်။
ဟုတ်ပါ့။ ဒါ သဘာဝ ပါဘဲ။ ;-)
ပုံလေးတွေက အမေ နဲ့ ရွာကို လွမ်းစေပါတယ်။
တကယ်ပန်းချီကားလေးကို ကြည့်နေရသလိုပါပဲဗျာ… လက်စွမ်းထက်ပါ့ ဆြာမှော်ရေ၊
ကိုမှော်ဆရာကို အရမ်းတော်တာဘဲလို့ဘဲ ချီးမွမ်းတော့မယ်
ဓာတ်ပုံလို့ မထင်မိပဲ သဘာဝပန်းချီကားတစ်ချပ်ကို မိုးလင်းလင်းမှာ ကြည့်မြင်ရသလိုပဲ ခံစားမိတယ်။ အေးလည်းအေးချမ်းသွားတယ်။ မိုက်တယ် ဓာတ်ပုံပညာလည်းသင်ရဦးမယ် ဆြာတို့ရယ်…
မိုးလင်းမဟုတ်ဘူး မ မနောရဲ့
ညနေ ၄ နာရီ ကျော်နေပြီ …
မိုးရွာပြီးစမို့ အုံ့နေတာ …
အိပ်တန်းပြန်တဲ့ငှက်အမဲတွေရယ် တောင်တန်းအပြာရယ် မြေကြီးနီနီတွေရယ် အစိမ်းရင့်ရောင်သစ်ပင်ကြီးရယ် မီးခိုးငွေ့ ငွေ့ ထွက်နေတာလေးရယ် ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ချမ်းသွားတယ်………..
လှည်းယာဉ်အပေါ်ကပုံလေးကိုကြိုက်တယ် အညွှန်းမပါလို့ ပြန်ညွှန်းပေးထားတာ …………
အပေါ်ဆုံးကပုံလေးက မှောင်ရီသန်းနေတော့ ပိုပြီးပန်းချီဆန်သလိုပဲ… ဒီမြင်ကွင်းလေးတွေကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ တကယ်ရောက်သွားပြီး ကျေးလက်ရဲ့အေးချမ်းမှုကိုရလိုက်သလိုပဲ … တောကိုတောင်သတိရသွားပြီ